Yini esikwaziyo ngegamu? Uhle "namozolila" amehlo ethu ezimakethe, uthanda izingane zethu futhi ngezinye izikhathi sizihlaziya uma kukhona umhlangano omkhulu. Kodwa yini ngempela le gum yokuhlafuna, izinzuzo zayo kanye nengozi kithi kanye nezingane zethu zihlala zibuza imibuzo evulekile. Kodwa lokhu akukona ukwelashwa okungaqondile.
Ukufuna i-gum ezindaweni zomphakathi ngokuqinisekile kuyaphikisana nezwi elihle, kodwa ngezinye izikhathi kudingekile. Eqinisweni, ukuhlafuna i-gum kunganikeza okungaphezulu kunokuphefumula okusha nokuthokozisa injabulo. Kodwa ngaphambi kokusho lutho mayelana nezinzuzo zalo mkhiqizo, isitatimende esilandelayo kufanele senziwe: i-chewing gum ingaba usizo kuphela uma ingenashukela futhi uma ukusetshenziswa kwayo kungadluli imizuzu engama-30 ngosuku.
Umlando wokuhlafuna i-gum
Kukholelwa ngokusemthethweni ukuthi i-chewing gum yasungulwa phakathi nekhulu le-19. Ngo-1869, uWilliam Isibonelo esivela e-Ohio wathola ilungelo lobunikazi lomkhiqizo wakhe, okuyi-mass chewing ngendlela ye-plasticine. Le gum i-chewing ine-taste yayo eyingqayizivele efana ne-til. I-chewing gum eyaziwa kakhulu yathandwa kakhulu, kuze kube yilapho kamuva ingenziwanga futhi ibe nemnandi ngezingxube ezithandekayo nezijwayelekile. Eminyakeni engamashumi ayisithupha kuphela kamuva i-chewing gum yathola ukubukeka kwanamuhla. I-American Walter Dimar yakwazi ukuthola ibhalansi ephelele phakathi kwezingxenye zayo: i-raber ye-20%, ushukela we-60% noma isabelo, i-19% isiraphu ye-corn kanye no-1% ukunambitheka. Isibonakaliso esiyinhloko sekhwalithi ye-gum, yebo, yayiyi-elasticity futhi ihlala ikhona.
Empeleni, ukuhlafuna i-gum kwafika kubantu kakhulu ngaphambili. Noma kunalokho - ezikhathini zokuqala ze-Neolithic. Abavubukuli baye bathola amaqanda amazinyo ngezicucu ze-resin. AmaGreki asendulo ayekhetha i-resin yezihlahla ze-coniferous, ngokungafani namaMaya, owasebenzisa i-sapodil izinkuni zezinkuni.
Namuhla, amabutho ahlomile ase-US asungule uhlobo olusha lwefomula yokuhlafuna i-gum equkethe izinto zokulwa nezifo ezivumela amasosha ukuba 'aqhube' amazinyo awo empini. Izinzuzo zalesi simiso zicacile - kuyoba usizo kubantu abaningi abasazimele bomphakathi. Olunye uhlobo lokusungulwa koososayensi baseMelika yi-chewing gum enokucuketfwe kwe-caffeine, okukwazi ukugcina amasosha ekubekwe eceleni isikhathi esithile ukuze angazi ukukhathala noma ukulala.
Ukuhlanzeka okungeziwe kwesigxobo somlomo
Ukufuna i-gum kuyisimo esihle sokuzivikela ngokumelene ne-caries. Ukusetshenziswa kwansuku zonke kwekhofi newayini elibomvu, kanye nokubhema kushintsha umbala we-koqweqwe lwawo amathoni amaningana. Kodwa sonke siyazi ukuthi ukucwilisa amazinyo kuyisibonakaliso esibalulekile sesimo sabo. Kuyiqiniso ukuthi ayikho i-gum gum engakwazi "ukubhekana" nayo yodwa ngamathanga emazinyo, kodwa lokhu kuyindlela enhle yokwengeza.
ukuhlafuna i-gum isekela umlomo omanzi, kushukumisa ukugcoba, ngaleyo ndlela kusize ukubuyisela umphumela omubi we-asidi ku-koqweqwe lwawo lwezinyo ngemuva kokudla. Ngokufanayo, amazinyo ahlanzwa ngokufaka "ukuhlanganisa" izinsalela zokudla kwi-band ehlanganisiwe. Bavele banamathele kuso, futhi empeleni lezi zincithakalo ziyisinye sezimbangela eziyinhloko zokubambisana, okugcina ekubhubhiseni indawo yokuvikela yezinyo. Akufanele sikhohlwe ngokuphefumula okusha. Ukufuna i-gum kuyabuqabula - lokhu kuqinisekile. Kuyiqiniso, le nqubo ilinganiselwe ngesikhathi.
Kumele siqaphele ekukhetheni i-chewing gum kubantwana bethu, ukuze singabalimazi. Amazinyo abantwana abathinteka kakhulu ngoshukela (ngezinye izikhathi angabonakala ebumnyameni futhi ngisho nokubola kwamazinyo obisi, okungagcina ekuholela ezinkingeni ezinzima ngamazinyo ahlala njalo). Kungaba usizo uma i-chewing gum esiyithengayo ezinganeni ayiqukethe ushukela futhi isetshenziswe nge-fluoride ne-xylitol. I-xylitol evikela ngokuphumelelayo ukwakheka kwe-plaque ne-caries. Ukusetshenziswa kwawo kwamazinyo kunzima ukugcizelela.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ayikho i-chewing gum engakwazi ukufaka esikhundleni sokuxubha amazinyo nokugcoba ngamazinyo - izinzuzo zayo kanye nokulimala kungabangela ukungqubuzana, kodwa into eyodwa ayinakuphikwa - udinga ukuxubha amazinyo kunoma yikuphi. Ama-karoti nama-apula, awusizo kakhulu kulokhu.
Ukuqiniswa kokuzivikela emlonyeni womlomo
Iphunga elimnandi, yebo, akuyona into enhle kakhulu engenzeka kithi. Kodwa, ngenhlanhla, i-mint chewing gum iphumelela ukulwa nale nkinga, iyanqanda futhi ihlukanise iphunga emlonyeni. Nokho, kungaba usizo uma i-chewing gum iqukethe amabhaktheriya e-lactic acid, enakekela ibhalansi ekhona emlonyeni womlomo. Amaqembu anjalo anwebekayo asevele ekhona futhi athandwa kakhulu kwamanye amazwe. Ngaphezu kwalokho, ezinye i-chewing gum zenziwe nge-aluminium lactate, eyanciphisa kakhulu ukuphuma kwamagundane nokunciphisa ukuvuvukala. Leli gum ekhethekile yokwelapha - izinzuzo zayo kubantu ababhekene nezifo ze-periodontal, bahlolwe futhi baqinisekiswa ochwepheshe.
Ukuvinjelwa kwe-asidi ukungena kulesi sikhungo
Lokhu kuyiqiniso - i-chewing gum inomphumela omuhle ohlelweni lokugaya ukudla. Ngenxa yokuthi ekuhlaleni ukukhiqizwa kwamathe, kwanda kakhulu, kugwinya kakhulu. I-sali ihlukumeza i-acid enobudlova futhi ibangele ukucabanga okugwinya ukuvimbela ukunyakaza kwayo okuvela ngaphakathi esiswini kuya endaweni. Abacwaningi e-King's College eLondon bathola ukuthi labo abahlafuna i-chewing gum njalo isigamu sehora ngemva kokungenisa hhayi nje kuphela amazinyo avikelwe ukubola kwamazinyo, kodwa futhi bavimbela ngokuphumelelayo ukubuyiselwa kokudla ne-asidi kuya kwesisindo. Ngakho-ke ungacabangela ukuhlaziya i-gum izindlela ezisemthethweni zokulwa nenhliziyo.
Ukuvikelwa ngokumelene ne-otitis media yendlebe ephakathi
I-otitis enjalo "ilungelo", ngokuvamile lezingane ezincane, ngokuvamile ezibhekene nokutheleleka okubangelwa amagciwane. Kodwa ososayensi baseyunivesithi yaseFinland bathola ukuthi ukutheleleka kwezindlebe kungavinjelwa kalula uma ukufuna i-gum ngaphandle kokushukela kanye ne-xylitol. Angakwazi ukubhekana ngokuphumelelayo nokubola kwamazinyo nama-bacteria aqukethwe emgodini womlomo, kodwa futhi nge-pneumococci, okubangela ukuvuvukala kwendlebe ephakathi.
Ukunciphisa ukungenisa ikhalori
Abacwaningi baseMelika baphetha ngokuthi i-chewing gum engenawo ushukela ingazuza ukulawula isisindo ngokunciphisa ukudla kwekhalori. Ucwaningo lwabandakanya abesilisa nabesifazane abangama-35 abaphilile abafanele ukuhlafuna i-chewing gum imizuzu engu-20 ngaphambi kokudla kwasekuseni, bese kuthiwa kabili ngaphambi kokudla kwasemini. Imiphumela yabonisa ukuthi bonke ababambiqhaza badla ama-calories angama-67% ngaphansi kwesidlo kunokuba babevame ukwenza ngaphambili. Futhi, lezi khalori azizange zishiswe usuku, kepha ziguqulwa zibe amandla ahlanzekile - ngakho wonke umzimba wathola amandla angu-5%. Ososayensi bakholelwa ukuthi lokhu kutholakala kungasetshenziswa ngempumelelo ukulwa nokukhuluphala.
Ikhono elikhudlwana lokufunda
Uprofesa eyunivesithi yaseJalimane wafinyelela esiphethweni sokuthi ukunyakaza ukuhlakulela kufana nokukhiqizwa kwenkumbulo ebuchosheni ngesivinini esikhulu. Lokhu kungenxa yokuthi ubuchopho bungcono kakhulu ukuhlinzeka ngegazi namaseli aphuzi ukuthola oksijeni xaxa ukusebenza kwemihlathi. Ucwaningo olwenziwe yizingane ezivela ezikoleni eziningana lubonise ukuthi ukuhlushwa, ukwamukelwa kanye nekhono lokubamba ngekhanda lenyuke ngo-20% uma kuhlafuna i-gom.
Kwesinye isifundo, ososayensi baye bafakazela ukuthi i-chewing gum ithuthukisa umkhiqizo wemisebenzi yezibalo. Kulesi sifundo, abafundi abangu-108 abaneminyaka engama-13 kuya kwengu-16 ubudala, abahlolisisa izifundo zezibalo, bahlanganyela. Emasontweni angu-14 kamuva, imiphumela yokuhlola yabonisa ukuthi labo abafuna ukuhlaziya i-gum babonisa imiphumela ephezulu ka-3% kunezinye. Ngaphezu kwalokho, abahloli baqaphela ukuthi izingane "zokufuna" zifuna isikhathi esingaphansi sokuphumula futhi zingaphansi kokucindezeleka.
Ngokuvamile, lapho ehlezi esitokisini isikhathi eside, umshayeli ukhathele ngenxa yokwehliswa okukhulu ekugxileni kwawo. Izibalo zikhuluma ngokuzwakalayo: yonke ingozi yesine ingenxa yokukhathala, ukungalindelekile, noma ukulahlekelwa okwesikhashana kokugxila komshayeli. Futhi uma udakwa ngaphambi kohambo olude lwekhofi - ingabe kuyoba usizo kulokhu? Ososayensi baseSpain baseYunivesithi yaseZaragoza bathola enye, indlela eyamukelekayo futhi enhle kunazo zonke - efuna ukuhlafuna ngenkathi ifuna i-chewing gum. Lokhu, ngaphezu kokuqabula umoya, kugcina ubuchopho busebenza njalo, ngaleyo ndlela kukhulisa ukuhlushwa futhi ikhono lokusabela ngokushesha. Ngokwesibonelo, phakathi neMpi YaseKorea, amabutho aseMelika ayenesisindo esikhethekile sokuhlafuna ukuze abe njengengqondo enkulu ngangokunokwenzeka.
Ukusiza abanesifo sikashukela
Namuhla, izigidi zabantu ziphethwe yisifo sikashukela futhi ziyaphoqeleka ukuba zinike umzimba wazo nge-insulin nsuku zonke ukuze ziphile. Ngakho-ke umbuzo: "Kungani i-insulin engeke ihlinzekwe njengephilisi?" Futhi impendulo, ngeshwa, ayihambisani nabantu abaxhomeke kwi-insulini ngenxa yokuthi i-insulin ishabalaliswa ngokushesha lapho kuhlaselwa khona emathunjini. URobert Dale, isazi samakhemikhali eYunivesithi yaseSyracuse, usefake isicelo se-patent ye-chewing gum elwa nesifo sikashukela. Umqondo wakhe wukuthi ekhoneni lakhe elikhethekile lokuhlafuna i-vitamin B12 libopha iphrotheni equkethwe emanzini. Le phrotheni inamandla okuvimbela ukuchithwa kwamavithamini. Usosayensi wahlobanisa i-insulini ene-vitamin B12, futhi waqhuba nokuhlolwa kwamagundane okwakubonisa ukuthi lokhu kungakhipha i-insulini egazini. Ososayensi bathi le gum isilungele ikakhulukazi abantu abanesifo sikashukela futhi lokhu kusungulwe kusasa elihle.
Isondlo esifanele ne-peptic ulcer
Ukudla okucebile kumavithamini B
Izakhiwo eziwusizo ze-oatmeal
Amantongomane asebenzayo empilweni yabantu
UPhilip Kirkorov uhlele ukuboshwa kukaDidier Maruani ngamaphoyisa
Izinqubo zokungcebeleka njengendlela yokunciphisa ukucindezeleka
Intombazane ithi iyakuthanda, futhi iyabelana nabanye abantu
Ukwenza umuntu abe nemona futhi ajabule
Ukuhlanganyela nomyeni wakhe: indlela yokuphila isahlukaniso
Ukuzalwa kukaMariya Oyingcwele uMariya 2017: umlando weholidini, ama-omens kanye nemikhosi, behalalisela